A Wanderer's Notebook: New Year
Pages from the Vagabond's Diary
တစ်နှစ် တစ်နှစ်ဆိုတာ အကူးအပြောင်းမြန်ပေမယ့် တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း အရွယ်က သိသိသာသာကြီးအိုမင်းသွား တာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်တော့ သိပ်မသိသာလှ ။ စိတ်အတွင်း သဏ္ဍာန်မှာဆိုရင်တော့ နှစ်သစ်ရောက်လို့ စိတ်ရွှင်သွားသလို ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနှင့် နှစ်ဟောင်းဟာ ကျန်ခဲ့ပြီရယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်လိုခဏလောက်တော့ လှည့်စားလို့ရရင် ရနိုင်မယ် ။
သည် New Year … မှာ တော့
ထူးမခြားနားစွာပဲ ပန်းတွေလည်း ပွင့်မြဲ ပွင့်မည် ။ ပျော်တတ်သူတွေလည်း ရှာကျန်ပျော်ကြမည် ။ နှစ်သစ်ကိုလည်း ကြိုမြဲကြိုရမည် ။ နှစ်ဟောင်းကိုလည်း ချန်မြဲချန်ရစ်ခဲ့ကြရမည် ။
သည်ထက်ပိုပြီးတော့ တော့… ဘာမှ မထူးခြားပါ ။
“သည်ည …. လူငယ်တွေပျော်ကြ
ကားတွေ ၊ ရထားတွေအကုန်မှာ လူငယ်တွေပြည့်လို့
နှစ်သစ်ကိုကြိုကြ …. သတဲ့လေ
သူတို့တတွေ ခေါင်းထဲမှာ ရှိမှရှိပါစ ….”
သည်ည တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားနေသည် ။ ခါတိုင်းလို စာဖတ် ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့လည်း မရ ၊ သည်တော့ အိပ်ယာပေါ် ဝင်လှဲပြီး မျက်နှာကျက်ပေါ် စိုက်ကြည့်လို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ခပ်တိုးတိုး ရွတ်နေတော့လည်း တစ်ဒင်္ဂတောင်စိတ် စုစည်းလို့မရ .. ။ ရုတ်ချည်းထ၍ ပြတင်းဘက်လှမ်းကြည့်တော့ မြင်ကွင်းမှာတော့ ခါတိုင်းလိုပဲဘာမှ မထူးခြား ။ ဆူညံသံတွေသာ ကြားနေရသည် ။နောက်ပြီး သည်မှာတော့ ချမ်းမြမြလေးတောင်မအေး ။ ညသည်အိုက်စပ်စပ်နိုင်လှသည် ။ ဟိုဆီမှာတော့ ဆောင်းနှင်းလေအေး ပတ်ဖျန်းတဲ့ New Year ပေါ့ ။ သည်လို ချမ်းတဲ့ညမျိုးမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကိုယ့်အတွက် သက်သက်ရည်ရွယ်လို့ “ဆောင်းအမီ” သီချင်းကိုဆိုမနေနိုင်ဘူးလား ။ အိုက်စပ်စပ်နိုင်တဲ့ သည်ညမှာ မျောနေရတဲ့ ကျတော်ကတော့ သည်သီချင်းကိုမုန်းသည် ။ “ဆောင်းရယ် နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းမျိုးကိုလည်း မကြားရဲ ။ မချမ်းဘဲ ၊ နှင်းမဝေဘဲ သည်မှာတော့ နှစ်သစ်ကူးနိုင်သည် ။
သည်လိုညမျိုးမှာ ကောင်လေးတွေက ချစ်သူဆီပေးဖို့ လက်ဆောင်ကို စီစဉ်နေကြလိမ့်မယ် ။ ကောင်မလေးတွေကလည်း “Happy New Year” ချစ်သူဆီက ဖုန်းအလာကိုစောင့်နေကြ ရင်း မနက်ဖြန်မနက်မှာ ရောက်လာမယ့် နှစ်ကူးလက်ဆောင်ကို စိတ်မှန်းပြီး မျှော်ကောင်းမျှော်နေကြပေပေါ့ ။ ကောင်လေးတွေကရော နှစ်ကူးလက်ဆောင်ကို နှင်းဆီနီတွေပေးမလား ၊ ကောင်မလေးတွေကရော ကောင်လေးတွေအတွက် လက်ကိုင်ပုဝါ လက်ဆောင်ပေးဖို့များ ကြံနေကြလေရော့လား ။ ပန်းနီနီလည်းမပေးဖူးပါပဲ ၊ လက်ကိုင်ပုဝါလည်း တစ်ထည်တစ်လေတောင် လက်ဆောင်မရဖူးပဲနဲ့များ ခုလိုညမျိုးမှာ တစ်ယောက်ထည်း ယောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေရတဲ့ ကျတော့်အကြောင်း သူတို့လေးတွေသိအောင် အကြောင်းကြားရင်ကောင်းမလား ။ သည်လိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးရင် ချစ်သူချင်းကွဲတတ်ကြသတဲ့ ။ ဒါပေမယ့်လည်း သည်လိုအဆိုမျိုးဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်၊ လူမျိုးပေါင်းစုံမှာ လက်ခံလိုက်နာ ကြပါတယ်လို့တွေးမိတော့ စိတ်သက်သာသလိုရှိသွားသည် ။ နှစ်သစ်လက်ဆောင်ကြောင့် ကွဲရတယ်ရယ်လို့တော့ မရှိကောင်းပါဘူး ။
လမ်းမီးရောင်လက်လက်သည် တမ်းတလွမ်းမော စိတ်ကိုနှောင့်ယှက်သည် ။ ဘေး ၊ အောက် ၊ အပေါ် ရှိသမျှမှ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပျော်နေကြတဲ့ အသံဗလံတွေက အဆိုးဆုံးပါဘဲ ။ အောင်မလေးဗျာ Happy New Year …. ဘာပျော်စရာလဲ ။ တစ်နှစ်ကုန်လို့ နောက်တစ်နှစ်ကူးတာ ဘာများထူးခြားလို့လဲ .. ။ အသက်တစ်နှစ်ကြီးတော့ရောဘာများ ချက်ချင်းကြီးပြောင်းလဲသွားမှာလဲ ။ ကျတော့်မှာ စိတ်ညစ်ညူးထိုင်း မှိုင်းစရာတွေရှိ သမျှပျောက်သွားပြီးတဲ့လား .. နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ။ အရာရာကို အစဆိုပြီးပြန်စလို့ ရမှာတဲ့လား ။ ချာခနဲလှည့်လို့ မီးရောင်စုံကို ကျောခိုင်းလိုက်သည် …။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့ ပူပူလောလော ဝယ်ထားတဲ့ နှစ်သစ်ပြက္ခဒိန်ကြီးက ထီးထီးမားမား….။
စားပွဲပေါ်မှာတော့ ဖတ်လက်စစာအုပ်ကြီးက ထီးထီးမားမား … ။ အောင်မလေး ထူလိုက်တာ တစ်ဝက်ကျော်ပြီးအောင်ဘယ်လိုများဖတ်လိုက်တာပါလိမ့်…။ အိပ်မပျော်နိုင်သေးတာတော့ အမှန် ။ သည်လို ညမျိုးမှာ အိပ်ဆေးကိုအားကိုး ရရင်တော့ ကျတော့်လောက် ညံ့တဲ့သူ ရှိတော့မှာမဟုတ် ။ ဖျစ်ညှစ်ပြီးတော့လည်း စာအုပ်ကြီးကို ဖတ်နေနိုင်ပေါင် ။
အတိတ်ကို ယောင်ယောင်လေးတွေရုံမှ နှင့်မွန်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်လာတတ်တော့ သည်လိုညမှာ အနာဂတ်ကိုပဲတွေး ရမည်ဆိုရင်တော့ သိပ်မဆိုးလှ ။ နောက်နှစ်မှာ ဘာများဖြစ်လာမလဲ ။ ကောင်းတာကိုချည်းမျှော်လင့်ထားသလို သည်လိုညမျိုးမှာကျ တွေးရတာတော့ ပျော်စရာ ။ နောက်နှစ်မှာ ငါပိုပြီးတော်မယ် ၊ ပိုရင့်ကျက်မယ် ။ ပိုကြည့်ကောင်းလာမယ် ။ သည်လိုဆို အခုလို ယောင်တောင်တောင်ဖြစ် ရမှာမဟုတ်တော့ ။ ခုလို တစ်ခုခုကို စိတ်ပူပြီး မောမဆုံးလည်း ဖြစ်ရမှာမဟုတ်တော့ ။ သိပ်ကိုလှပတဲ့ အနာဂတ်ပါလား ။ အဲလေ… နှစ်သစ်ပါလား ။ အဲဒီ နှစ်သစ်ကို မကြာခင်ငါပိုင်ဆိုင်ရတော့ မှာပါလား ။ သည်လိုဆိုတော့လည်း …. လောကဟာ နေပျော်ပါသလား ။ အခုလောလောဆယ် မပြည့်မစုံဖြစ်အမျှ နှစ်သစ်မှာ အစစ အဆင်မပြေဖူးလို့ ဘယ်သူကြိုမြင်နိုင်လို့လည်း ။ လောကကြီးသာယာပါစေ ။ ကြားရ သမျှ တေးသံတွေ ၊ ဂစ်တာသံ ဒေါင်ဒင်တွေဟာ အသက်ဝင်လာသလို ရှိသည် ။
သည်ညတော့ ရေးနေကျ Diary မှာ များများစားစားကြီးရေးဖြစ်တော့မည် မဟုတ် ။ တကယ့်ကိုတိုတိုလေး…
“Happy New Year 2009
နှစ်အကူးသာပါစေ … ၊ မောင့်ချစ်ဦးလည်း မာပါစေ .. ။”
နှစ်ကူးတေးသံ ဆူဆူညံနဲ့ လမ်းပေါ်ကအော်သံတွေကြားမှာ နစ်မြောလို့ ဟိုအဝေးဆီက တမ်းတမ်းတတ သီကြွေးလိုက်တဲ့ “ဆောင်းအမီ” သီချင်း စာသားတစ်စွန်းတစ်စကို ကြားလိုက်မိသလိုတော့ ရှိသား ….. ။ ။
(31.12.2008 - 11:25pm)
Posted by Aung Phyoe at 23:27
Labels: A bit personal, အထိမ်းအမှတ်စာ
To Download Myanmar Font.
မြန်မာစာဖောင့် Download လုပ်ရန်
Blogs I love to read regularly
သံသာလေကမ်းတိုင် - ဇာတ်သိမ်း
The ideas and opinions expressed in this weblog are mine alone, and do not represent the views of any other organization with which I may be associated.
© 2007, Aung Phyoe